सरकारले सार्वजनिक गरेको ‘नागरिक एप’ के हो, कसरी प्रयोग गर्ने ?
काठमाडौं । के तपाईँ सरकारी सेवा लिनुपर्दा अहिले पनि आवश्यक कागजात बोकेर कुनै कार्यालयमा घन्टौ लाइनमा बस्दै आउनुभएको छ ? हरेक कामपिच्छे आफ्ना महत्वपूर्ण कागजात फोटोकपी गरेर फाइल पनि त तयार गर्दै आउनुभएकै होला ! विस्तृतमा
आजबाट रवि लामिछानेले न्यूज २४ छोड्दै
हालसम्म कतिले डाउनलोड गरे ‘नागरिक एप’ ?
एजेन्सी । सन् २००१ मा धनाड्य डेनिस टिटो अन्तरिक्षमा पुग्नका लागि पैसा तिर्ने पहिलो व्यक्ति बने । उनले अन्तरिक्ष यात्राका लागि २ करोड अमेरिकी डलर तिरेका थिए ।
काठमाडौं । सरकारले सबै सरकारी निकायलाई जनतासँगको संवाद मजबुद पार्न इन्टरनेटको सामाजिक सञ्जाल प्रयोग बलियो बनाएको छ । त्यसका लागि जनशक्ति पनि खडा गरेको छ ।
सानफ्रान्सिस्को । चिनीया सेन्सरसीप अनुकूल गोप्य रुपमा खोजी इन्जिन ९सर्च इन्जिन० निर्माण गर्न लागेको भन्दै गुगलमै कार्यरत एक हजारभन्दा बढी